Malunga nathi - Dongguan Raofeng Plastic Products Co., Ltd.
I-Dongguan Raofeng Plastic Products Co, Ltd ngumzi-mveliso wokulungisa ukungunda weplastikhi ovelisa ngokufanelekileyo ukungunda kwephaneli yenqaku lencwadana. Umzi-mveliso ubekwe kuMmandla woRhwebo waseRoma, kwiDolophu yaseQingxi, kwisiXeko saseDongguan, kwiPhondo laseGuangdong. Iqela lokuqhubekeka labantu abangaphezu kwama-60 kunye nangaphezulu kwama-30 eekhompyuter zangaphandle / oomatshini bentsimbi / oomatshini bokugaya / abagayi / oomatshini / oomatshini bokusika iintambo kunye nezinye izixhobo zokulungisa ngokuchanekileyo, kunye ne-90T ukuya kwi-470T umatshini wokwenza inaliti yaseHaiti kunye nomgca we-1.
Inkampani inamandla obuchwephesha, izisa uyilo olukumgangatho ophezulu kunye neetalente zeR & D kunye nobunjineli obunamava nobuchule kunye neetalente zobugcisa. Ivelise uyilo oluphambili kunye nesoftware yophuhliso enjenge-UG â… ¡kunye nePro-E evela eMelika ukuqonda uyilo kunye nophuhliso lweemveliso. Qalisa ukuveliswa kwe-agile kunye nobunjineli obuguquliweyo ukuqinisekisa umgangatho wemveliso kunye nokunciphisa umjikelo wokubumba. Yenze indlela yokwenza yangoku yesiseko ngokusekwe kukudityaniswa kwetekhnoloji, ukulawulwa kwamanani njengoyena mzimba uphambili, kunye nokusebenza ngesiqhelo koomatshini njengesongezelelo.
Le nkampani iye iminyaka engaphezu kweshumi yeqela ziphene iteknoloji processing ngenaliti, kunye nezixhobo imveliso ephucukileyo, imo yolawulo phambili, kwinqanaba eliphezulu-iqela lobugcisa kunye pre-ukuthengisa egqibeleleyo kunye nenkonzo emva-ukuthengiswa, iye yaphumelela ukuthembela eliphezulu nokuqondwa ezintsha nezindala. abasebenzisi.
Inkampani ibambelela kumgaqo "wokulandela umgangatho obalaseleyo, ukubonelela ngeemveliso ezinokuthenjwa, ukuhlangabezana neemfuno zabathengi, kunye nokunyuka okungapheliyo"; ukulandela imigaqo-nkqubo esemgangathweni "esemgangathweni sisiqinisekiso sexabiso, ukudala ishishini elinamaxabiso aphezulu", ukuze kufezekiswe "ukuba yingcali Umbono" weeplastiki ezichanekileyo ukubonelela ngezisombululo kubanikezeli "yenza iinzame ezingapheliyo.
Inkqubo ulwenziwo ulwenziwo:
Hlalutya inkqubo yokubumba imveliso, isakhiwo nokuvunda kunye nenkqubo yokuvelisa. Qinisekisa ukuba ubomi sokubumbela iyahlangabezana neemfuno zabathengi.
Uyilo olupheleleyo lwesakhiwo sokubumba kunye neendawo zokulungisa, kwaye ubeke iimfuno zebandla kunye neemfuno zenkqubo yokubumba.
Hlalutya ngokupheleleyo iindawo zeplastikhi zokubonakala kweziphene (ezinje ngokuncipha, njl.
Imbonakalo yomngundo: Inkangeleko yokubumba kufuneka ikhulule umhlwa, amaqhuma, okanye iziphene zemodyuli ezingaphelelanga.
Ukuthuthwa komngundo: Ukuthuthwa komngundo kufuneka kuxhotyiswe ngamacwecwe okubamba, ukupakishwa kuqinile kwaye akukho rusi.
Ulwazi lomngundo: Ngexesha elifanayo njengoko kuhanjiswa ukubumba, iseti epheleleyo yokubumba enxibe iinxalenye kunye nolondolozo lwezixhobo zonikezelo zibonelelwa.
Ishishini: uyilo lwesikhunta, ukukhula komngundo, ukuvelisa ukungunda, ukubumba inaliti, ukuhlanganisa iinkonzo zesitayile.